Al-Shabaab oo Lix ruux ku togatay fagaaro ku yaalla Saakow | KEYDMEDIA ONLINE
Al-Shabaab oo Lix ruux ku togatay fagaaro ku yaalla Saakow
Al-Shabaab ayaa Lix ruux ku toogtay Degmada Saakow ee gobolka Jubbada Dhexe, kadib markii ay caro xooggan ka qaadeen xubno ka tirsanaa oo lagu laayay Puntland.
SAAKOW, Soomaaliya - Kooxda Al-Shabaab ayaa fagaare ku yaalla degmada Saakow ee Gobolka Jubbada dhexe, ku toogtay lix ruux oo midi haween tahay, saacado kadib markii Maamulka Puntland uu laayay in ka badan labaatan xubnood oo ka tirsanaa Al-Shabaab, kuwaas oo 18 ka mid ah lagu helay in ay masuul ka ahayeen falalkii amni darro ee Gobolka Mudug.
Al-Shabaab Lixda ruux ee ay togteen waxa ay ku eedeeyeen in ay ahaayeen sir-doon u shaqeynayay Mareykanka, waxaase la rumeysan yahay in ay ugu aarayeen, xubnahoodii shalay lagu togtay Puntland.
Fartuun Cumar Abkow, oo ahayd haweeney 36 jir ah ayaa ka mid ah dadka ay toogteen waxayna ku eedeeyeen in ay u shaqaynaysay CIA-da Maraykanka.
Halka shanta ninna ay kala yihiin, Cumar Cabdiqaadir Hiiraale, Cabdi Xassan Axmed, Ibraahim Cumar Cali, Saadaam Cismaan Maxamed, iyo Aweys Xassan Xaaji, kuwaas oo ay dhamaan ku eedeeyeen in ay basaas u ahaayeen Sirdoonka dalka Maraykanka.
Ma aha markii koobaad oo Al-Shabaab ay fagaaroo ku taago shaqsiyaad ay ku eedeeyeen in ay u shaqeynayen sirdoonka Mareykanka, waana eed ay qoorta ku suraan qof walba oo iayaga ka ra’yi duwan.